Akụkọ - Igwe igwe ice kacha mma na China
Obi abụọ adịghị ya na teknụzụ igwe igwe igwe si Vogt USA, ọ na - emekwa igwe igwe igwe kachasị mma. Ruo ogologo oge, Vogt na-achịkwa ahịa maka teknụzụ ya kachasị elu. Igodo nke teknụzụ ahụ bụ maka njikwa njikwa mmiri na sistemụ.
Mgbe ebusasịla ọtụtụ igwe akpụrụ mmiri Vogt, anyị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ ọrụ dị mkpa.
Igwe akụrụngwa igwe na-ekpochapu ọkụ nwere ihe mmetụta mmiri mmiri, nke na-achịkwa ọkwa mmiri mmiri na evaporator ma nọgide na ya n'ụzọ ezi uche dị na ya. Nke ahụ dị mkpa na ọnọdụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ, nke ahụ ga-ekpebi ma ọ bụrụ na sistemụ ahụ na-acha ọcha na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha uhie uhie. Nke ahụ dịkwa mkpa na COP sistemụ.
A na-achịkwa mmiri mmiri site na ọkwa mmiri nke evaporator. Mmiri mmiri nwere ike iji ọgụgụ isi gbanwee onwe ya iji mee usoro ahụ n'ọnọdụ zuru oke.
Igwe niile nwere otu onye na - enweta mmiri mmiri n’elu evaporator. Nke ahụ na-eji maka igbochi mmiri mmiri slugging n'oge defrosting. Ọ ga - ejide mmiri mmiri ọ bụla na - eme ka mmiri gwụ, ma mmiri mmiri a ga - agwụ n'oge ice na - eme mgbanwe. Onye na-agbanwe ọkụ na-ekpocha mmiri mmiri na-enye aka ma ọ bara ezigbo uru maka imeziwanye usoro COP.
E nwere onye ọzọ na-anabata mmiri mmiri nke bụ mgbe condenser ahụ gasịrị, a na-ebu ụzọ kpoo mmiri mmiri n'ime ya site na gas na-agbapụta. Ya mere, nzere na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ ga - eme ka oge mkpụkọ akpụrụ dị mkpụmkpụ, yabụ, akụrụngwa na - arụ ọrụ kwa ụbọchị ga - emeziwanye.
Igwe niile bụ kọmpat imewe. Enwere ike ịnọ na ntanetị na ntanetị. Ọ na-eme ka nnyefe a dị mfe ma dịkwa mfe. A ga-etinye igwe ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ na igbe ndị ahụ n'oge nnyefe. Mgbe onye ọrụ natara igwe akpụrụ mmiri, ọ dị ya mkpa itinye ya n'ụzọ kwụ ọtọ, wee jikọọ igwe na mmiri na ike, ọ dịkwa njikere maka ịme ice.
Anyị na-enyocha Vogt tube ice teknụzụ kemgbe 2009, na anyị bụ naanị ụlọ ọrụ mmepụta ihe na China na-enyocha ma mụta teknụzụ dị elu a site na USA.
Chineselọ ọrụ ndị China ndị ọzọ ka na-etinyekọta ihe anọ dị mkpa nke friji ọnụ ma na-aga n'ihu na-eji igwe na-adịghị mma na nke ochie eme mkpo igwe mkpofu ahihia.
Ihe dị iche n'etiti ụlọ ọrụ m na ndị China ndị ọzọ pụtara kemgbe 2009.
Vidio a na-egosi igwe igwe akpụrụ mmiri 5T / ụbọchị, emere na Septemba 3, 2020.
Mgbe afọ 10 nyochachara na mmelite, anyị na - eme igwe igwe ice karịa Vogt, ma n'ezie, ha dị ezigbo mma karịa igwe ice ice ndị ọzọ.
akụrụngwa ya nwere ike ịme ihe karịrị tọn tubes 5 kwa ụbọchị, ikike ahụ dabere na 30C gburugburu ebe obibi, 20C mmiri mmiri dị.
Igwe ahụ nwere ike ịme ice siri ike, enweghị oghere. Igwe ahụ nwere ike iji obere oghere mepụta akpa ice. Igwe ahụ nwekwara ike ime akpa ice nwere nnukwu oghere.
Oghere / Enweghị oghere, na ihe niile dabere na oge ị na-eme akpụrụ ma ndị ọrụ nwere ike ịtọ ya. Ọnọdụ mbụ ya bụ maka ịme ice siri ike, ma ọ bụ akpọ ice gourmet ice / cylinder. Ice bụ 100% uzo, kristal na mara mma. Ọ bụrụ na ejiri mmiri dị ọcha mee ice, ice ga-apụta ìhè, kristal karịa ka egosiri na vidiyo.
Ice ahụ zuru oke maka ihe ọ /ụ /ụ / ihe ọ drinkụ coolingụ na ihe ndị ọzọ. Ice bụ nri nri dị mma. Nke a 5T / ụbọchị tube ice igwe na-eji Bitzer pistin compressor, ihe nlereanya 4HE-18Y-40P. Nke ahụ bụ 15HP pistin compressor, ebe ndị ọzọ na-emepụta ihe eji eme ihe na China na-eji 25HP piston compressor.
Obere ihe ndetuta na-eme ka sistemụ nwee ike ịzọpụta ike. Tụnyere iji 25HP Compressor, a igwe nwere ike inyere gị aka ịzọpụta ihe upto 547500KWH nke ọkụ eletrik na 10 afọ.
Ọ bụrụ na ịhọrọ igwe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na igwe teknụzụ China, ị ga-akwụ ụma maka ụgwọ ọkụ eletrik ọzọ, nke ahụ ruru 547500 KWH nke ọkụ eletrik.
Ejiri igwe a na-eme ka mmiri jụrụ oyi + ụlọ mmiri jụrụ oyi, nke na-ekwe nkwa ikike dị elu na mpaghara ebe okpomọkụ. Igwe nju oyi bụ R507a, ma ọ nwere mmekọrịta gburugburu ebe obibi karịa R22 ma ọ bụ r404a. Anyị nwekwara ike iji R448a, ma ọ bụ R449a ma ọ bụrụ na ị si mba EU, USA ma ọ bụ mba ndị ọzọ, mana ọnụahịa ga-adị elu karịa n'ihi igwe jụrụ oyi dị oke ọnụ.
Akara ice dị 29mm, nke kachasị ewu ewu na ụwa. 22mm, 35mm dayameta dịkwa. Nkà na ụzụ igwe igwe igwe a sitere Vogt, USA. Ma ọ dị mma karịa igwe ice Vogt na ọnụ ahịa ya dị ala karịa 70%.
tube ice igwe, Vogt ice igwe, tube ice onye mere, ice tube igwe, nke kacha mma tube ice igwe, China ice igwe, ice igwe factory, China ice igwe factory, Chinese ice igwe, ice igwe maka ire, tube ice, esi mee tubụ ice, akpụrụ osisi.